अन्द्रियास – Word of Truth, Nepal
साँचा खोजकर्ताहरू कहिल्यै निष्फल हुनेछैनन्। जसले साँच्ची नै सत्य जान्न चाहन्छ र साँचो परमेश्वरलाई चिन्न चाहन्छ, उसले आफूले खोजेको कुरा भेट्टाउनेछ। अन्द्रियास एक साँचो खोजकर्ता थिए अनि उनले साँच्ची नै भेट्टाए। खोजकर्ताहरूलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा यर्मिया २९:१३ मा दिइएको छ – “जब तिमीहरूले आफ्ना _____________‌__ हृदयले मलाई _____________‌__, तब तिमीहरूले मलाई _____________।” उहाँलाई साँच्ची नै खोज्नेहरूलाई परमेश्वरले निराश पार्नुहुनेछैन ! हिब्रु ११:६ मा हामी सिक्छौं, “_____________‌__ यत्‍नसित _____________‌__” परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ। परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले (यत्‍नसित खोज्नेहरू इनामका भागीदार बन्नेछन्! परमेश्वरलाई खोज्नेहरूले परमेश्वरलाई भेट्टाउनेछन्! अन्द्रियास एउटा खोजीमा लागेका मानिस थिए। के अन्द्रियास एक भेट्टाउने मानिस बने (यूहन्ना १:४१)? _____________‌__। उनले के भेट्टाए (यूहन्ना १:४१)? _____________‌_______________‌_______________‌_______________‌________ _____________‌________‌__।
त्यसपछि अन्द्रियास आफ्नो माछा मार्ने काममा फर्के। एकदिन येशूले अन्द्रियास र उनका साझेदार मछुवाहरूलाई गालीलको किनारमा भेट्नुभयो। येशू त्यहाँ हिँड्दै आउनुहुँदा पत्रुस र अन्द्रियास के गर्दैथिए (मत्ती ४:१८)? _____________‌_______________‌_______________‌__। मत्ती ४:१९ मा येशूले उनीहरूलाई बोलाउनुभयो, “_____________‌__ _____________‌__ _____________‌__, र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका _____________‌__ तुल्याउनेछु।” यसको मतलव अबदेखि उसो उनीहरू माछा पक्रनुको सट्टा _____________‌__ पक्रनेभए। के उनीहरूले येशूले अह्राउनुभएबमोजिम गरे (मत्ती ४:२०)? _____________‌__। माछाको मछुवाबाट उनीहरू मानिसको मछुवा बनेर उनीहरूको कामको परिवर्तन हुनेभयो!
उक्त परम्पराअनुसार अन्द्रियास निरन्तर ख्रीष्ट प्रचार गरिरहेका हुनाले प्रचारलाई बन्द गर्न अस्वीकार गरेका हुनाले एकजना सरकारी अधिकारी उनीसित ज्यादै रिसाए। उनले अन्द्रियासलाई मूर्तिपूजामा भाग लिनलाई आदेश दिए। अन्द्रियास सो गर्न इन्कार गरे जसको फलस्वरूप उनलाई कोर्रा लगाइन अनि क्रूसमा फाँसी दिइन आदेश जारी गरियो। उनलाई क्रूसमा काँटीका सट्टा डोरीहरूले झुण्ड्याइयो जसले गर्दा उनको मरण विस्तारै मात्र भयो र उनको पीडामाथि पीडा थपियो। दुई दिन सम्म झुण्डिएर परमेश्वरको प्रसंसा गर्दै र मानिसहरूलाई येशूकहाँ आउन आग्रह गर्दै रहेपछि, उनि अन्तमा मरे। उनी झुण्ड्याइएका क्रूस “X” आकारको थियो अनि त्यसबेला देखि यस प्रकारको क्रूसलाई “सन्त अन्द्रियासको क्रूस” भनिन थाल्यो।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 18:12:362020-04-28 14:39:42अन्द्रियास